कस्तो अवस्थामा लसुन खाएमा त्यसले मानिसहरुलाई नोक्सान गर्नसक्छः
एजेन्सी । तरकारीको स्वाद बढाउनको लागि मात्रै होइन औषधिको रुपमा पनि लसुनलाई वर्षौ देखी प्रयोग गरिन्छ । आयुर्वेदिक चिकित्सकका अनुसार लसुनको प्रकृति गर्मी र सुख्खा हुन्छ । विस्तृतमा
यी खानेकुरा तामाको भाँडामा राख्दै नराख्नुहोस्
हाइट बढाउन कस्ता खानेकुरा खाने
खरबुजा खादै हुनुहुन्छ होसियार बिष हुन सक्छ
शीतलता प्रदान गर्ने हुँदा गर्मीमा निकै रुचाइने फल हो, खरबुजा । शरीरमा पानीको मात्रा सन्तुलित राख्न मात्र होइन, धेरै फाइदा गर्ने यो फल । कतिपय दीर्घ रोगमा समेत लाभदायक मानिन्छ ।तर, स्वास्थ्यका लागि खाइने फलले कतै त्यही स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुर्याइरहेको ’दयगत सतर्क हुनुपर्छ ।
हिरोइनजस्तै छिन् अर्बपतिकी यी छोरी, १७ वर्षकै उमेरमा जोडिन् करोडौँको सम्पत्ति
शनिबार यस्ता काम गर्दा फलदायी हुँदैन
केराको बोक्रा फाल्नुहुन्छ ? केराको बोक्रा पनि यति धेरै उपयोगी !
काठमाडौं । हामीले उपयोग गरिने फलफूलमध्येमा केरा पनि एक हो । केराको फाइदा बारे हामीले धेरै कुरा थाहा छ तर, केरा खाएर फालिने बोक्राको पनि अनेकौँ फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा भने कमैलाई थाहा हुनसक्छ ।
चना खाँदा स्वास्थ्यलाई यस्ता फाइदा !
एजेन्सी । चना खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । चना पिसेको होस् या टुसा पलाएको होस्, यसमा पाइने पौष्टिक तत्वहरू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, आइरन, भिटामिन, क्याल्सियम स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ ।